ကောင်းကင်ဖြူ: အိမ်တွင်းနတ်ဆိုး အမှတ် ၂ ( အသွင်ပြောင်း နာမည် ကြိတ်သား ဖြင့်ပြုလုပ်သော ပရိဘောဂ ပစ္စည်းများ)
အိမ်တွင်းနတ်ဆိုး အမှတ် ၂ ( အသွင်ပြောင်း နာမည် ကြိတ်သား ဖြင့်ပြုလုပ်သော ပရိဘောဂ ပစ္စည်းများ)
ကြိတ်သား ထည်ပစ္စည်များကို ၁၉၇၀ ခုနှစ်လောက် က စပြီ ကမ္ဘာ့ ဈေးကွက်ထဲသို့ ရောက်ရှိလာပြီ မြန်မာနိုင်ငံမှာတော့ ၁၉၉၀ နှစ်မှစ၍ ယနေ့အချိန်ထိ ရေပန်းစား သုံးစွဲလျှက်ရှိပါတယ်
ကြိတ်သား ထည် ပြုလုပ်ရာတွင် ကုန်ကြမ်း အဖြစ် သစ်ခွဲစက်မှ ထွက်ရှိသော လွှစာ မှုန့် ကို အခြေံ၍ ၊ ဖိုက်ဘာမှုန့် ၊ ပလပ်စတစ်မှုန့်များသာမက အခြာနည်းဖြင့် ကြိတ်ချေ ၍ ရသော အမှုန့် များ ကို ကော်စေး ၊ သစ်စေး ၊ ဓာတုဗေဒ ကော်စေး တစ်မျိုးမျိုးဖြင့် ရောစပ်ကာ ဖိအားနှင့်အပူးပေ စေပြီး အချပ် အပြား အသွင် ပြုလုပ်ထား ခြင်းဖြစ်ပါတယ် ။
လူကို ဒုက္ခပေးရာတွင် အဓိကကုန်ကြမ်းများထက် မသုံးမဖြစ်သုံးရသော ကော် က အဓိက ဒုက္ခ ပေးတာပါ ။
တချို့ထုတ်လုပ်မှု့စရိတ်သက်သာစေ၇န် urea – formaldehyde ကို ကော်အဖြစ်အသုံးပြုတက်သောကြောင့်
သာမန် ကြိတ်သား ထည်တွင်သုံးသော ကော် ထက် ဖော်မယ်ဒီဟိုက် ဓာတ်ငွေ့ ပိုထွက်စေပြီ လူကို အန္တရာယ်ဖြစ်စေပါတယ် ။
ကြိတ်သာထည် ပစ္စည်းများသည် အပူချိန် များလေ ဖော်မယ်ဒီဟိုက် ဓာတ်ငွေ့ပိုထွက်လေဖြစ်ပြီ ယင်းဓာတ်ငွေ့ ကို ရေနှင့်ရော စပ်လျှင် မပုပ်ဆေး ၊ တာရှည်ခံဆေး အဖြစ်သုံးနိုင်သော ဖော်မလင် ဓာတ်ပေါင်း ကို ရနိုင်ပါတယ် ။
ဖော်မယ်ဒီ ဟိုက် ဓာတ်ငွေ့ မြင့်မားစွာရှိနေသည့် အခန်းတွင်း နေထိုင်သူများသည် မျက်ရည်ပူကျခြင်း ၊ မျက်လုံးနီကျင်ခြင်း ၊ အသက်ရှူ ကျပ်ခြင်းအပြင်ကလေးများတွင် ပန်းနာရင်ကျပ် ကိုပင်ဖြစ်ပါတယ် ။ အစမ်းသပ်ခံ တိရစ္ဆာန်များတွင် ကာဆာဖြစ်စေသည်ကိုလည်းတွေ့ ရပါသေးတယ် ။
ယနေ့ အချိန်ခါတွင် နေအိမ်များ ၊ရုံးခန်များ တွင် ကြိတ်သားထည် ပစ္စည်းနှင့် မကင်းသည့် နေရာအလွန်း ရှားမည် ထင်ပါတယ် ။
ကြိတ်သားထည် ရှိသော အခန်းအား လေဝင်လေထွက်ကောင်းအောင်ပြုလုပ်ခြင်း ၊ လေအေးပေးစက် တက်ဆင်ခြင်း ၊ နိုင်ငံအများစုတွင် ဖော်မယ်ဒီဟိုက် ဓာတ်ငွေ့အနည်းငယ်သာ ထွက်ရှိသည်ဟု အာမခံပေးထားသည့် ကြိတ်သားထည် များကိုဝယ်ယူ သုံးစွဲခြင်း ဖြင့် အိမ်တွင်းနတ်ဆိုး တစ်ကောင်ကဲ့သို့ လူကို ဒုက္ခပေးစေသော ကြိတ်သားထည်ပစ္စည်း များရဲ့ အန္တရာယ်မှ ကင်းလွတ်မည်ဖြစ်ပါတော့ သည် ….. ။
ကိုးကား (သုတစွယ်စုံ မဂ္ဂဇင်း ၂၀၀၉ ၊ ဒီဇင်ဘာ)
Posted by မောင်ဘုန်း at 6:23 AM
မောင်ဘုန်း November 14, 2011 at 6:44 AM
အပျိုကြီးတော့ လုပ်ပြန်ပြီ ဘာတွေ မနည်းမနော လည်းဗျ
ကျနော် အပေါ်မှာလည်း ဘာမှမ၇ှိပါလား
mstint November 14, 2011 at 7:35 PM
ကြိတ်သားနဲ့လုပ်ထားတဲ့ ပရိဘောဂတွေဆိုရင် စိတ်ဝင်စားတယ်မောင်ဘုန်းရေ ပေါ့လည်းပေါ့ပြီး ဝယ်ရတာလည်း ဈေးသက်သာလို့း)
မဒမ်ကိုး November 14, 2011 at 9:37 PM
မှိုတွေလိုက်တယ်ခနခနပဲ စူပါဝမ်းက ၀ယ်ထားတာ .
ဘာလုပ်ပစ်ရမလဲ အောင်မလေး အိမ်ကိုဖုန်းဆက်ပြီး
jasmine(တောင်ကြီး) November 15, 2011 at 3:29 AM
ချော(အစိမ်းရောင်လွင်ပြင်) November 15, 2011 at 7:30 AM
အခန်းထဲမှာ ကြိတ်သားစားပွဲလေးတစ်လုံး ကုတင်ဘေးနားမှာတင် ရှိတယ်.
အဲသလိုဆိုးကျိုးတွေရှိတယ် ဆိုတာ တကယ်မသိဘူး.
နေရာရွေ့မှဖြစ်မယ် . ကုတင်နဲ့ သိပ်ကပ်လွန်းနေတယ် မကောင်းဘူးထင်တယ်.
အိမ်တွင်းနတ်ဆိုး အမှတ် ၃
အိမ်တွင်းနတ်ဆိုး အမှတ် ၂ ( အသွင်ပြောင်း နာမည် ကြိတ...
ပုံပြင်လေးရဲ့ ... အဖြေ